U-Roland Schulze, onguSolwazi oyi-Emeritus kweze-Hydrology e-UKZN aphinde abe i-Senior Research Associate e-Centre for Water Resources Research (i-CWRR), uthole umklomelo we-Lifetime Achievement kuma-African Utility Week Industry Awards.
Umcimbi uklomelise abadlala indima kwezogesi namanzi e-Africa kuzigaba eziyi-12.
Zingaphezu kwama-600 izihambeli ezivela emazweni angama-30 ebezihambele lo mcimbi obusezingeni eliphezulu, abaningi bangochwepheshe abaziwayo ezimbonini zogesi namanzi. USchulze wathola umklomelo we-Lifetime Achievement ewunikezwa ngamajaji avela emhlabeni jikelele angama-22.
‘Ngiyaziqhenya futhi ngizizwa ngithinteka emoyeni,’ kusho uSchulze. Uzwakalise ukubonga kwabahlele lo mcimbi ngobusuku obuhle futhi angasoze abukhohlwa.
U-Schulze ubuyele emuva ekhuluma ngabantu nezikhungo ezimenze waba umuntu awuyena nempumelelo yakhe, kubalwe nabazali bakhe abahoxisa amaphupho abo ngenxa yokungabinayo imali, lokhu kwabenza bayeka ukufunda beneminyaka eyi-14 ukuze bayosebenza. Ubonge othisha bakhe ngokutshala imbewu yokusebenzisana nabanye, yokwazi kabanzi ngezemvelo kanye neyokuzimela. Ubonge abaqeqeshi bakhe baseNyuvesi, ikakhulukazi uSolwazi John Danial noPeter Tyson, ngokumkhuthaza ukuthi enze ucwaningo, kanye nasebenza naye uSolwazi Potgieter Meiring ngokumkhulula ekwenzeni umsebenzi wezesayensi.
Ubonge ngokukhethekile unkosikazi wakhe weminyaka engama-50, uWaltraut, kanye nezingane zabo ezimbili nabazukulu abayisikhombisa.
USchulze uphinde wabonga i-National Research Foundation, i-Water Research Commission (i-WRC), neminyango eyahlukene kahulumeni, abafundi bakhe be-Masters ne-PHD abanentshiseko, kanye nabacwaningi asebenza nabo ngokumeseka. Ubonge ukwesekwa abezemfundo lapho asebenza khona isikhathi esiningi ngokumvumela alethe ushintsho futhi aphumelele.
USchulze, ophethule izifundo zakhe ze-undergraduate, ze-Honours, ze-Masters kanye ne-PHD eNyuvesi yaseNatali, waqala ukusebenza njengo thisha wesayensi nezibalo esikoleni samabanga aphezulu, waba ingxenye ye-alma mater ngonyaka wezi-1969 lapho asebenza khona waze wathatha umhlalaphansi ngonyaka wezi-2007. Ekuqaleni kweminyaka wezi-1980s waphatha isifundo se-hydrology; lesi sifundi sakhula ngaphansi kobuholi bakhe sakha i-CWRR, useqeqesha abafundi abenza iziqu zamabanga aphansi abangaphezu kwama-150 kanye nabafundi abenza iziqu zamabanga aphezulu emhlabeni jikelele njalo ngonyaka.
U-Schulze wayenguSolwazi oyisivakashi e-IHE Delft Institute for Water Education ese-Netherlands nase-Swedish Meteorological and Hydrological Institute. Usebe yingxenye yezifundo ezingaphezu kwe-100 ezimfushane ezikhuluma nge-hydrological modelling kanye nokushintsha kwesimo sezulu eNingizimu Afrika, Afrika naseYurophu.
Ukuba yingxenye kuka Schulze ocwaningweni lweze-hydrology lukazwelonke naphesheya sekuhambe iminyala engaphezu kwama-50, futhi eminyakeni engama-30 eyadlula ubeqhubeka nocwaningo oluphathelene nokushintsha kwesimo sezulu. Impumelelo yakhe eyinqophamlando ifaka ukuthuthukiswa kwe-Agricultural Catchments Research Unit (i-ACRU), uhlelo lwe-agro-hydrological modelling kanye ne-SCS-SA design hydrology simulating model.
Useshicilele imibhalo eyahlukahlukene engaphezu kwama-600 ngaphansi kwegama lakhe, kusukela kumaphephandaba kuya ezincwadini kanye nezihloko, miningi imibhalo esazophuma. Useqede izinsuku eziyisithupha zekhefu e-United Kingdom, e-Germany, e-United States kanye nase-Netherlands. U-Schulze useqeqeshe abafundi be-Masters ne-PHD abangama-20, kumanje uqeqesha abayisishagalombili. Laba ababengabafundi bakhe badlala indima enkulu emikhakheni eyahlukahlukene.
Imiklomelo ka-Schulze ihlanganisa i-Fellowship ye-University of Natal, i-Fellowship ye-Royal Society of South Africa, i-Life Membership ye-International Water Academy e-Norway, i-South African Institute of Agricultural Engineers (i-SAIAE) Fellowship, i-Membership ye-Academy of Science of South Africa kanye nemiklomelo eminingi yokuba uthisha oqavile. Unendondo yegolide nesiliva evela ku-SAIAE.
Usesebenze kumabhodi okuhlela amajenali esayensi amaningi emhlabeni jikelele, amaningi e-South African National Committees, amakomidi okululeka, kanye nama- WRC Project Steering Committees angama-74. Usesebenze kumabhodi/ amakomidi ahlukahlukene aphesheya, esebenzisa amakhono akhe ahlukene, esebenzela izinhlangano ezifaka i-United Nations, European Union kanye ne-UNESCO. Ngaphandle kwezokufunda, usesebenzele i-Board of Deutsche Schule Hermannsburg iminyaka engama-22, umkhandlu wasesontweni lakhe iminyaka engama-11, kanye ne-Board of Truestees e-Kew Gardens.
U-Schulze usemenywe ezingqungqutheleni zaphesheya ezingaphezu kwama-170 njengesikhulumi sosuku.
Umbono ka-Schulze ngekusasa lomkhakha wakhe wukuthi ama-Hydrologists nabaphathi bamanzi baqondisise ngokwenzekayo ohlelweni olubucayi lwezamanzi angaphansi komhlaba kanye emazweni anenselelo yokuntuleka kwamanzi Ugcizelele isidingo sokuba ochwepheshe, bashintshe izinto, bahlanganise ukugcinwa kwamanzi, ukudla kanye namandla ogesi.
Isithombe sithathwe ku-Roland Schulze SchulzeR@ukzn.ac.za